30kii maalmood ee aan xaaskayga xambaaray – Qaybta 3 | Somaliska
30kii maalmood ee aan xaaskayga xambaaray – Qaybta 3
Maanta waxaan qaadaneynaa qeybtii 3-aad ee sheekadii xiisaha badneyn “30kii maalmood ee aan xaaskayga xambaaray” Qeybtii hore waxaad ka akhrisan kartaa halkaan. Osman ayaa sheekadii meeshii aan ku dhaafay nooga sii wadaya.
Aniga oo ku jahwareersan codsigeeda ah in aan xambaaro 30 maalmood ayaan waxaan gaaray xafiiskii. Waxaaba igu sugeysa Deeqo oo aad moodid in ay war u baahi qabto. Markaan kafee wada cabnay ayaan u sheegay codsiga qalafsan ee ay xaaskayga soo bandhigtay. Qosol ayay ku dhufatay aad u moodo in uu jees jees yahay markaas ayay tiri “Qiyaano kasta oo ay isku daydo kama dhuuman karto furiinka” hadalkaas ayaan dhibsaday oo waxaan isdhahay haddii iyada la furi lahaa sidaa ma u qosli lahayd.
Habeenkii guriga ayaan ku soo laabtay iyadoo xaaaladu ka degantahay sidii hore, wax sheego ah iyo xiriir nama dhex marin aniga iyo xaaskeyga ee intaan casheynay ayaan seexanahay. Habeenkaas oo dhan waxaa madaxayga ku wareegaya xambaarka i sugaya subaxii.
Maalintii koowaad ayaa timid, aniga iyo xaaskeyga mudo jirkeena isma taaban oo waxaan kala noqonay sidii dad ajaanib kala ah, markii aan xambaaray subaxii ugu horeeyay xaaladu waxay u ekeyd mid qaabdaran. Wiilkeena yar ayaa gadaalkeyga ka sacbinaya markii aan sariirta ka soo qaaday oo aan albaaba gaynaayay “Aabe ayaa xambaaraya hooyo” ayuu gadaalkeyga ka sacbinayaa. Hadalkiisa xanuun ayuu igu abuuray maadaama uusan ogeyn xaalada ka dambeysa xambaarka. Isagu waxa uu u maleeyaa in aan jeceyl u xambaarayo balse ma oga in ay isdhaafi iga tahay.
Markii aan albaabka gaarnay ayay si hoose iigu tiri “Ha u sheegin wiilkeena arinta furiinka”. Waan dareemay hadalkeeda balse waxay iila muuqatay in ay tahay iyada keliya mida ka fikireysa wiilkeena. Irada ayay ka baxday oo wadada ayay istaagtay si ay baska u sugto, aniguna shaqadii ayaan abaaray.
Maalintii labaad ayaan sidii oo kale u xambaaray. Maalintaas waxaad u maleysaa in uu isbedel jiray oo hawshu si degan ayay u dhacday. Waxay ku tiirsaday bogeyga, aniguna waxaan ursaday catarkeeda. Waxaan dareemay in aanan xaaskeyga mudo si fiican u fiirin. Waxaan dareemay sida ay u gaboowday inkastoo aan 10 sano wada nooleyn maalintaas sida aan u fiiriyay waligey uma fiirin. Waxaan yaqiinsaday in dhisida reerkeena ay ku noqotay hawl adag. Intii aan irida u sii waday waxaan hoos isaga canaantay in aanan sidii la rabay ula qeybsan dhisitaanka reerkeena.
Maalintaas markii aan xafiiska tagay ayaa Deeqo igu soo degdegtay iyada oo iga raadinaysa in aan uga sheekeeyo sida aan u bahdilayo xaaskayga balse runtii abateed uma hayn maalintaas. Waxaan dareemay xiisihii aan u qabay iyada lafteeda in uu hoos u dhacayo.
La soco qeybta 4-aad
waaw shekadan cajibka ah o macan badan tolow halke ku dhaman donta
waa sheeko xiiso badan noo yar yarey si aysan nooga dhamaan nin dhaqsi kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
waw wlh waa shidantahay sheekadan weeka ayaaba ila nooqday 20 saano kkkk
salaan saree dhaman aakhyarata jiimcale walaal bal lasoo dhaqso sheekada alaa saaka wan ooyay markii aan aakhriistay ninka waxan u maleynaya wax yar oo naxris ah aya soo galeysa caku naag kale deeqa wan ku soogaya bal meshaad ku dabayso dhiilo
I can,t wait next one
January 8, 2012 at 02:46
Caku iyo ragga qaarkiis waxuu ku leeyahay waxan dareemay sida ay u gabowday, oo markay iyadu gaboobeysay isagu masoo da’a yaraaney waa yaabe. Saanaanba ku xanaaqsanahay ka waran hee.
Waxanse u rajeynayaa inuu dib isu saxo oo marwadaas baarinimada iyo caaqilnimada isku darsatay uusan ku doorsan naag uu waxa uu kala kulmi doono mustaqbalka uusan war u hayn.